OxygenOS 5.1.6 wepụrụ n'ihi mkpọka na OnePlus 6 | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ dị oke egwu gbasara mmelite sistemụ, ọ bụ OnePlus. Firmlọ ọrụ ndị China malitere izu gara aga na OTA nke ihe omuma ohuru nke OxygenOS 5.1.6 na awa ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ewepụ ya n'ihi nsogbu okuku na ọhụrụ OnePlus 6.
Na awa mgbe ntọhapụ nke ọhụrụ version, ọtụtụ ọrụ mkpesa banyere glitches na ọhụrụ version na-eme ka ndị ọhụrụ nlereanya nke ụlọ ọrụ na n'ikpeazụ melitela iji gbochie nsogbu a ịgbasa na ndị ọrụ ndị ọzọ. A ga-ewepụta mmelite ọhụrụ maka ngwaọrụ na elekere ole na ole sochirinụ.
Nanị ụzọ ị ga-esi edozi ọdịda ahụ bụ site na ịmalitegharịa
Ndị ọrụ ndị nwere ụdị nke arụnyere nwere ịmalitegharị ngwaọrụ iji dozie ọdịda ahụ. Na nkenke, ọ bụ nsogbu na-ekpochi ngwaọrụ na ihuenyo ma ghara ikwe ka mmekọrịta ruo mgbe ebugharị ya, ihe na-agwụ ike maka ndị ọrụ etinyegoro ya. N'aka nke ọzọ, ndị nwere ya ebudatara ma etinyeghị ya, agaghịzi enwe ike ịme ya ebe ụlọ ọrụ ahụ kpochapụrụ ya kpamkpam Ọ ga-adị mkpa ichere maka nyochagharị nke otu ihe ahụ ka e wee megharịa ya n'ụdị OTA.
Versiondị ọhụrụ ahụ gbakwunyere ndozi na ngwanrọ igwefoto na mmelite ndị ọzọ a ga-ahapụ ugbu a ruo ụbọchị ole na ole ruo mgbe ha nwere ike ịchọta azịza ya ma weghachite nsụgharị ahụ. Maka ugbu a, anyị nwere ike ikwu nke ahụ OxygenOS kachasị dị ugbu a bụ 5.1.5 na nke ọ bụla anyị na-akwado ịhapụ ịhapụ ya iji zere nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » OxygenOS 5.1.6 wepụrụ n'ihi mkpọka na OnePlus 6